Sazy mihantona herintaona sisa… : afaka ihany, nivoaka ny fonja Hiary Rapanoelina | NewsMada
Sazy mihantona herintaona sisa… : afaka ihany, nivoaka ny fonja Hiary Rapanoelina
Sazy mihantona herintaona sisa no notononin’ny Fitsarana ambony ho an’i Hiary Rapanoelina, omaly. Afaka soa aman-tsara ka nivoaka ny fonja omaly, ity mpanakanto “administrateur”-n’ny pejy facebook “Fifosana hanatsarana ny peoples gasy”, izay voarohirohy ho nanao fanalambaraka ity.
Niakatra teny amin’ny fitsarana ambony, omaly, ny raharaha nanenjehana an-dRapanoelina Hiary, ary nandresen’ity farany tamin’izany. Fantatra fa navadiky ny fitsarana ambony ho sazy mihantona ho herintaona an-tranomaizina ny didy azon’ity mpankanto ity. Vokatr’izany, nahazo fahafahana avy hatrany izy rehefa vita ny taratasy mifanaraka amin’izany eo anivon’ny fitsarana. Ny 7 marsa lasa teo no nivoahan’ny didim-pitsarana nanameloka azy, ka nitanana azy tao amin’ny fonjan’Antanimora. Enim-bolana taty aoriana, nandresy soa aman-tsara ity mpanakanto ity, ka afaka mivoaka ny fonja.
Fiampangana azy ny hoe fanalam-baraka, fanohintohinana fiainan’olona manokana, fikasana haka an-keriny ny zanaka depiote iray. Nanda hatramin’ny farany ny fiampangana azy i Hiary. Anisan’ny notorina niaraka taminy ihany koa ny vadiny tamin’izany, ary niakatra fitsarana. Navotsotry ny fitsarana anefa ity farany, noho ny filazana fa tsy afaka ny handetika azy roa any am-ponja, noho ny fitsinjovana ny zanany. Izy ireo izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny pejy facebook iray “fifosana hanatsarana peoples gasy”.
Tamin’ny alalan’io facebook io no nivoahana karazana vaovao samihafa ka nahatohina olona maro indrindra ny mpanakanto sy mpanao politika. Nametraka fitoriana ireo avy eo ka izay no nampiakatra fitsarana ny raharaha, ny volana febroary lasa teo. Nampidirina am-ponja vonjimaika, talohan’ny fitsarana ny 7 marsa ary nanamelohan’ny fitsarana herintaona sazy mihatra an-tranomaizina izy.
Sazy mihantona herintaona ny resaka eto, ka mety hampiditra am-ponja azy indray raha misy ny fandikan-dalàna ataony. Na izany aza, efa mifaly ny vady aman-janany satria hiverina eny anivon’izy ireo ity raim-pianakaviana ity. Ireto fianakaviana izay niady mafy hatramin’ny farany tamin’ny fanafahana an’i Hiary. Nanampy azy ireo tamin’izany ny fikambanan’ny mpanakanto maromaro nahitana an’i Rossy, Njakatiana, Ndriana Ramamonjy, hatramin’ny mpanao gazety nahitana an-dRakotondrazafy Lalatiana, sns.
Araka ny ambetin-tenin’ireo olona ireo, karazana sazy fananarana ho an’ny rehetra izay tehaneho hevitra amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy ihany iny “Raharaha Rapanoelina Hiary” iny. Ity resaka fanehoan-kevitra amin’ny alalan’ny “internet” ity izay miteraka resabe hatrany, ary nahatonga ny minisitry ny Serasera, nampitandrina mafy izay olona mampiasa io ka “miteniteny foana”, araka ny filazan’izy ireo azy. Mety hisy olona hafa koa ho tratra tahaka izao?